Ciidanka Ahlu-sunna oo weerar ku qaaday guriga uu Guriceel ka degan yahay siyaasiga Cabdi Waal – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka Ahlu-sunna oo weerar ku qaaday guriga uu Guriceel ka degan yahay siyaasiga Cabdi Waal
Wararka naga soo gaaraya magaaada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan maamulka Ahlu-sunna Waljmeeca ay gelinkii dambe ee maanta weerar ku qaadeen guri uu magaaladaasi ka degan yahay siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad oo ku magac dheer “Cabdi Waal”.
Ciidanka Ahlu-sunna ee weerarka ku qaaday guriga Cabdi Waal ayaa la sheegayaa inay halkaasi ka qaateen hub uu lahaa siyaasigaas iyagoona sidoo kale halkaasi ka kaxeeystay ilaaladii Cabdi Waal ee guriga joogtay.
Siyaasiga Cabdi Waal ayaa la sheegaya inuu ka maqnaa guriga xilliga ay ciidanka Ahlu-sunna weerareen gurigiisa, waxaana la sheegayaa in siyaasigaasi uu haatan ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Ilaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeeysay weerarka ay ciidanka Ahlu-sunna ku qaadeen guriga uu magaalada Guriceel ka degan yahay Siyaasiga caanka ah ee Cabdi Waal.
Dhinaca kale, siyaasiga Cabdi Waal oo deegaan ahaan kasoo jeeda magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa inuu muddooyinkii ugu dambeeysay qorsheeynayay inuu ka mid noqdo maamulka Hirshabeele oo haatan doorashada xubnaha Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka socoto magaalada Jowhar.
Si kastaba, saraakiisha maamulka Ahlu-sunna ee gobolada dhexe ayaa sheegay inay dib faah faahin dheeraad ah kasoo saari doonaan, sababta keentay in ciidankooda ay weeraraan guriga uu magaalada Guriceel ka degan yahay Siyaasiga Cabdi Waal.